Posted by တန်ခူး at 12:24 PM
The main thing btween two candles, it should be in the right place. I pray everyday. It can go to the right place..
ကျနော်က ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်းလေး ဖြစ်ချင်တယ်....ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ အတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲကြိုးစားနေတယ် ..ကဗျာလေး ကောင်းတယ် အစ်မရေ့ အနှစ်သာရပြည့်ဝတယ်.......။
nice comparison with good expression
thanksalot to read and feel it.
အမကို အဲဒါလေးတွေ ကြိုက်တာ
အဓိပ္ပယ် ပြည့်ဝသော ကဗျာလေးပါဘဲ.....
( မြတ်နိုး ဆီကယူ သုံးတာ )
အမရေ အတွေးလေးက ကောင်းတယ်ဗျ...
ပထမ ဖယောင်းတိုင်လေးရဲ့မခိုးမခန့် အပြုံးရယ် ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်လေးရဲ့ရိုးသားတဲ့ အပြုံးရယ်ကို နှိုင်းယှဉ်တွေးတောရင်း...
very meaningful poem! so clever my dear....
အမ တန်ခူးက ကဗျာလဲ ရတာပဲကိုး။
ချိုသင်းတို့အိမ်မှာတော့ ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်လေးပဲ လင်းပါတယ်။ အေးအတူ ပူအမျှ လင်းပေးတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးရဲ့ ကျေးဇူးကို သတိတရ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူး။
တကယ်တော့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေက အထွန်းခံသက်သက်ပါ။ လိုအပ်ချက်အတွက် ထွန်းတာလား၊ အဆောင်အယောင်အတွက် ထွန်းတာလား..။ ထွန်းတဲ့သူအလိုကျ အရည်ပျော် အငွေ့ပျံရ၊ လင်းလက်ရတာလေ။
လှပတဲ့ကဗျာလေးရဲ့နောက်က စေတနာကိုတော့ အပြည့်အ၀ နားလည်ခံစားသွားပါကြောင်း။
ဖယောင်းတိုင်လေး နှစ်တိုင် အပေါ် အစ်မမြင်တဲ့ အမြင်ကို သဘောကျတယ်။ လူနေမှု အခြေအနေကိုလည်း ထင်ဟပ်စေတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ကဗျာလေးတပုဒ် . . .
မိမိရဲ့ တန်ဖိုး/အရည်အချင်း ကို အကျိုးရှိ မှန်ကန်စွာ အသုံးချဖို့ လိုကြောင်း ခံစားမိပါတယ်၊
နေမကောင်းဖြစ်မေလို့ များ ပျောက်နေတာလားလို့ ...စိတ်ထဲတွေးနေတာ....။
ခု...ကဗျာလေးကို တွေ့ လိုက် ဖတ်လိုက်ရတော့
ကျနော်တော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ခြင်းဆီရဲ့ 
နောက်ကွယ်က ပါတ်ဝန်းကျင်တွေ၊ မြင်ကွင်းတွေ
ခံစားမှုတွေကိုပါ တွေ့ လိုက် ခံစားလိုက်ရတယ် မတန်ခူးရေ....။
ဖယောင်းတိုင်လေး ၂တိုင်က ရိုက်ခတ်မှုတော့
မတန်ခူးက သိမ်သိမ်မွေ့ မွေ့ နဲ့ ထက်ရှတဲ့ 
မတန်ခူးတို့ မိသားစုတွေ ကျမ္မာကြပါစေ...။
Comment ရေးဖို့ ၀င်လာလိုက်
အပေါ်အပိုဒ် စာကြောင်းနဲ့ အောက် အပိုဒ်က စာကြောင်းယှဉ်တွဲဖတ်လိုက်
ကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဖယောင်းတဲ့ ဆိုတဲ့ နိမိတ်ပုံကို ယူပြီး ယှဉ်ပြသွားတာ လှလိုက်တာ။
ကျနော်တွေးမိတာနဲ့ အကိုဝေလင်း ရေးပြသွားတာနဲ့ ထပ်တူကျပါတယ်။ ကဗျာရှင်ရဲ့ စေတနာပါတဲ့ အတွေးလှလှကို နှစ်သက်မိပါတယ်။
အမရေ.. ကဗျာလေးလာဖတ်သွားတယ်။ ဒီတခေါက်ပါနဲ့ဆို ၂ ခေါက်ရှိပြီ။ မတန်ခူးရေ.. ခဏခဏ လာလာလည်တာ ကျေးဇူးပါ အမရယ်.. ပြန်လာချင်ပါတယ်.. ဒီတပတ်ပိတ်ရက်ရရင်တော့ အချိန်ရမယ် ထင်ပါရဲ့.. :)
လာဖတ်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ရေးမလို့ စဉ်းစားနေတာ။ကိုဝေလင်းနဲ့ ကိုစေးထူးတွေးမိသလိုနဲ့ တူတယ်လို့ပဲ ပြောတော့မယ်နော်။
အချိန်ရရင် ရေးပေးလေ... နော်..။
အမတန်ခူးရေ အမကဗျာလေးက ကောင်းလွန်းလို့ အရင်အခေါက်တွေက ကွန်းမန့်မရေးရဲဘူး။ အနှစ်သာရ ရှိလွန်းတဲ့ ဖော်ပြချက်လေးပါဗျာ။
အမက ကဗျာဥာဏ်လည်း လက်ဖျားခါရတာကိုးနော်။ အားကျတယ် အမ။
ရွာသားလေးရေ… တို့ လဲ အဲလို ဆုတောင်းချင်တယ်… နေရာမှန်မှာ ရှင်သန်ခွင့်ရပါစေလို့ ….
မောင်မျိုးရေ… ဒုတိယဖယောင်းတိုင်လေး ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ စေတနာစိတ်လေးကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ရမှာပါ…
ကျေးဇူးပါညီမလေးမယ်လိုဒီရေ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်…
မြတ်နိုးရေ… အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးပါနော်…
ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူပါ skyblueရေ…
ကိုဟန်လင်းထွန်းရေ… ခုလိုလာလည်ပြီး ကော်မန့် လေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ…. နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ချိုသင်းရေ… တို့ အိမ်လေးမှာလဲ ဒုတိယဖယောင်းတိုင်လေးပါပဲ ညီမရယ်…
ကိုဝေလင်းရေ… ကျေးဇူးပါ….ကျွန်မကဗျာထဲက ဖယောင်းတိုင်လေးတွေက ဖယောင်းတိုင်အစစ် မဟုတ်ပါဘူး….
ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ပုံရိပ်ရေ….
ခိုင်ရေ… ဟုတ်ပါတယ်… ခိုင်ပြောတာနဲ့ ကွက်တိပဲ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
မမ အားပေးသွားတာ အားကိုရှိသွားတာပဲ….
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ခုလို အားပေးစကားတွေက နောင်ပို့ စ်တွေအတွက် အင်အားပါ….
မ ရေ… ဘာဖြစ်လို့ လဲဟင်….
ကျေးဇူးပါကောင်းကင်ကိုရေ… ကျွန်မက ကောင်းကင်တို့ ဆီက သင်ယူနေတာပါ…
ကိုစေးထူးရေ… အထက်မှာ ကိုဝေလင်းကို ဖြေခဲ့သလိုပဲ ကျွန်မဖယောင်းတိုင်တွေက ဖယောင်းတိုင်အစစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး… ကျေးဇူးပါ…
နုရေ… ကျေးဇူးပါ… တို့ မှာ မျှော်လိုက်ရတာ မောလို့ ….
ပန်ရေ… ကျေးဇူးပါ…. ဖယောင်းတိုင်အစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး…
သက်ဝေရေ… အမှတ်တရ တက်ဂ် ပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
ကဗျာလေးက ကောင်းလိုက်တာ :)